အက်ဒ်ဝပ်စနိုးဒန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Interview » အက်ဒ်ဝပ်စနိုးဒန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
NSA က အသုံးပြုနေတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ရေး စနစ်အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ဖွင့် ချခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ထောက်လှမ်း ရေးဝန်ထမ်းဟောင်း စနိုးဒန် (၃၄) နှစ်ဟာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် မော်စကိုရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ နေနေပါ တယ်။ အဲဒီလိုသတင်းဖွင့်ချပြီးက တည်းက စနိုးဒန်ဟာ သူ့ရဲ့ အမိ မြေ အမေရိကန်မှာ နိုင်ငံတော် ရန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပါ တယ်။ သူဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ကာကွယ်သူ တွေရဲ့ လေးစားအားကျသူတစ် ယောက်၊ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာစနိုးဒန်ခင်ဗျား၊ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က ခင်ဗျားဟာ ဟောင် ကောင်က ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခု မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာရာဇဝင်မှာ အကြီးမားဆုံးထောက် လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက် ဖွင့်ချမှုရဲ့ အစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီက နေ့ ကျွန်တော်တို့ မော်စကိုက ဟို တယ်အခန်းတစ်ခန်းမှာ ထိုင်နေကြတယ်။ ခင်ဗျားကို ဖမ်းဖို့ အမေရိ ကန်အစိုးရက ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ အတွက် ခင်ဗျားရုရှားက ထွက် သွားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဌာနရဲ့ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ရေးယန္တရား ဟာ လည်ပတ်နေဆဲပဲ။ အရင်က ထက် ပိုမြန်မြန်လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီလိုဖွင့်ချခဲ့တာ တွေအားလုံးက တကယ်တန်လို့ လား။
အဖြေကတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်က အဲဒီဥပဒေတွေကို ပြောင်းလဲ ပစ်ဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) အဲဒီယန္တရား ကို နှေးသွားအောင်လို့ ကြိုးစားနေ ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်ကို ဝေဖန်သူတွေက ကျွန်တော်ဟာ လုံလောက်တဲ့ တော်လှန်ပြောင်း လဲမှု မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီ စနစ်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့မေ့နေကြတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ
လူတွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် သိတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတချို့ရှိနေတုန်းပဲ။ အဲဒီဌာနတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်နေတုန်းပဲ။
၂၀၁၃ နွေရာသီကတည်းက ပြည်သူတွေဟာ အဲဒီအချိန်မတိုင် ခင်ထိ တားမြစ်ခံထားရတဲ့ သိစ ရာတစ်ခုကို သိရှိသွားခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရဟာ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ Gmail အကောင့်ကနေ အားလုံးရယူနိုင်တယ်။ ခင်ဗျားဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်ရင် အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ သူတို့ဝရမ်းတောင် မလိုဘူးဆိုတာတွေပေါ့။ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေရဲ့ ဟန်ချက်ညီ မှုအကြောင်းကို ပြောရာမှာ ခင်ဗျားရဲ့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ တခြားနိုင်ငံ သားတွေကြား ခွဲခြားခွင့်မရှိဘူး လေ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်တစ် နိုင်ငံတည်းကမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတွေ အများကြီးက အဲဒီလိုပိုပိုပြီး လုပ် ဆောင်နေကြတယ်။ အဲဒီစည်း ဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိသင့်လဲဆို တာ ပြည်သူလူထုက ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ကျွန် တော်ပေးချင်တယ်။
ကြီးမားတဲ့ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တ်ာတို့ သိထားရသလောက်တော့ အဲဒီလုပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်တောင်မှ ထောင်ထဲ ရောက်နေတာမရှိဘူး။
အဲဒါကြောင့်ပဲ အဲဒါဟာ လျှို့ဝှက်ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ ကျွန် တော်ပြောတာပေါ့။ အဲဒီ NSA ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ တရားမဝင် ဘူး။ တကယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုအစီ အစဉ်တွေကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ လူ တွေဟာ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ တကယ်
အချုပ်ထဲရောက်နေရမှာ။ ကျွန် တော်တို့ ပြောနေတာ ဥပမာ မရေ တွက်နိုင်တဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေကို တွေ့ရှိပြီးတော့ ဂျာမနီရဲ့ ဂျီ-၁၀ ဥပဒေလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က အတည်ပြု . . . ။
အဲဒီဥပဒေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းခေါ်မှု (ဒါမှမဟုတ်) အီးမေးလ် တွေကို ထောက်လှမ်းရေးဌာနက ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပြစ်ပေးတာ၊ ရာထူးက နုတ်ထွက်တာ၊ အဲဒီလို စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းတဲ့ လုပ် ရပ်တွေကို ပြောင်းလဲတာမျိုးထက် အဲဒါတွေအားလုံး အဆင်ပြေပါ တယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေတစ်ခု ကျွန် တော်တို့ အားလုံးရခဲ့ကြတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ (BND) က အစ္စရေးဝန် ကြီးချုပ်လို မိတ်ဆွေတွေ (ဒါမှမ ဟုတ်) အမေရိကန်ပစ်မှတ်တွေ ကို ရည်ရွယ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုပေါင်း ၄,၀၀၀ လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရတဲ့ အချိန်မှာ ခင်ဗျားအံ့သြမိ လား။
ကျွန်တော်မအံ့သြဘူး။ စိတ် ပျက်မိတယ်။ အဲဒါဟာ တကယ်ပဲ ဂျာမနီမှာလိုပဲ ပြင်သစ်နဲ့ တခြား အဲဒီလိုနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာ အတူ တူပဲ။
စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုရဲ့ အ ဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နိုင်ငံတွေကို တိုက်ခိုက်မှုတွေဆီက ကာကွယ်ဖုိ့ဖြစ်တယ်။ မူအားဖြင့် တော့ အဲဒါဟာ ဘာမှမှားယွင်း တာမရှိဘူးလေ။
အဲဒီလိုဧရာမစောင့်ကြည့် ထောက်လှမ်းမှုတွေကြောင့် အ ကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက် မှုတွေကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်ဆို တဲ့ သက်သေမရှိဘူး။ ကိုဖီအာ နန်နဲ့ ဟီလာရီကလင်တန်တို့ကြား ဖုန်းဆက်တာကို ခိုးနားထောင်သ လိုမျိုးပေါ့။
အဲဒါကို BND က လုပ်ခဲ့ . . . ။
အဲဒီလို အသံဖမ်းထားတာက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ အ တော်များများကို တားဆီးဖို့ အ ထောက်အကူမဖြစ်ဘူးဆိုတာပါ ပဲ။
ဒါဆို BND နဲ့ NSA ကြား ကွာခြား တာတွေ ဘာရှိလဲ။
အရေးအကြီးဆုံး ကွာခြား ချက်ကတော့ ဘဏ္ဍာငွေပဲ။
ဂျာမန်အာဏာပိုင်တွေက NSA (ဒါမှမဟုတ်) CIA မရှိဘူးဆိုရင် သူတို့ဟာ နားမကြား၊ မျက်မမြင် ဖြစ်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သေချာတာပေါ့။ ဂျာမနီက ထောက်လှမ်းရေးအစီအစဉ်တွေ အတွက် တစ်နှစ်ကို ကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၇၀ လောက်သုံးနေတဲ့ အမေရိကန်လို ဖြစ်ချင်မှဖြစ် မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျာမနီဟာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ၂၀၁၃ က သူတို့ဟာ BND အတွက် ယူရို သန်း ၅၀ လောက်သုံးခဲ့တယ်။ အခုဆို ယူရိုသန်း ၃၀၀ ကျော်မှာ ရှိနေပြီ။
ဘာလင်မှာ NSA နဲ့ BND ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လွှတ် တော်မှာ NSA စုံစမ်းရေးကော်မတီ က သုံးနှစ်ခွဲအထိ စုံစမ်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမှာ တခြား အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် မူလ က စီစဉ်ထားသလို ခင်ဗျားကို သက်သေအနေနဲ့ မခေါ်ခဲ့ဘူး။ ဂျာမနီမှာ ခင်ဗျားခိုလှုံခွင့်ရဖို့က ခင်ဗျားရဲ့ အနေအထားပဲဖြစ် တယ်။
အဲဒါဟာ လိမ်တာပါ။ ကျွန် တော်ဟာ အခြေအနေတစ်ခုအနေ နဲ့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူး။
အဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အပြီး သတ်အစီရင်ခံစာရဲ့ တစ်စိတ်တစ် ပိုင်းကို ခင်ဗျားဖတ်ခဲ့ရတယ်နော်။ ခင်ဗျားရဲ့ သဘောထားအမြင်က ဘယ်လိုလဲ။
အဲဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတစ်ခု၊ယုံကြည်ရတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအများကြီးမျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစုအဖွဲ့အ များစုရဲ့ အဲအစီရင်ခံစာက စိတ် ပျက်စရာပါ။ ဂျာမန်လူထုက သူ တို့ရဲ့ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်း ရေးမူဝါဒတွေကို ဒေါသထွက်ခဲ့ ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါနဲ့ ပတ် သက်ပြီး သူတို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လို အပ်တယ်လေ။
ရာထူးက နုတ်ထွက်တာတွေ အ များကြီးရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကြားသိခဲ့ရတယ်။
မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့အသိုင်းအ ဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေအများကြီးတိုးတက် အောင် လုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ကျွန် တော်ထင်တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့တွေ ရဲ့ အဲဒီလိုချိုးဖောက်မှုတွေကို ကန့်သတ်ဖို့ ကျွန်တော်တုိ့အတွက်အ ချက်နဲ့ သိပ္ပံပညာကို သုံးသွားမယ်။
ခင်ဗျားလို သတင်းဖွင့်ချသူတွေ ဘာကြောင့်နောက်ထပ်ထွက်ပေါ် မလာတာလဲ။ သူတို့ ရုရှားမှာပဲ ခင်ဗျားလို အဆုံးသတ်ရမှာ ကြောက်နေကြတာလား။
ဒီဟာအတွက် မကောင်းမြင် အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။ လူတွေက သူတို့ဖမ်းဆီးခံရရင် နောက်ဆက် တွဲ ရလဒ်တွေ အရမ်းပြင်းထန်မယ် လို့ ခံစားနေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းမြင်တဲ့ အဖြေတစ်ခု လည်းရှိပါတယ်။ ၂၀၁၃ က ဖြစ် ရပ်တွေက အဲဒီထောက်လှမ်းရေး ဌာနတွေကို သတိထားမိလာစေ တယ်။ သူတို့ဟာ နောက်ထပ်ပစ် မှတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့။
ဒီက ဂျာမနီမှာရောပဲ လူတွေအများကြီးက ခင်ဗျားဟာ ရုရှားရဲ့ ဧည့်သည်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဘာ တွေ လိုက်လျောခဲ့ရလဲဆိုတာကို သိချင်နေကြတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ စာရွက်စာ တမ်းတွေ (ဒါမှမဟုတ်) စာရွက် စာတမ်းတွေကို ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုခွင့်မရှိတော့ဘူး။ ဂျာနယ်လစ် တွေမှာ အဲဒါတွေရှိတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် တရုတ် (ဒါမှမဟုတ်) ရုရှားက ကျွန်တော်နယ်စပ်ကို ဖြတ်ချိန်မှာ ဘာမှ ခြိမ်းခြောက်လို့ မရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်သည်းခွံတွေကို ခွာထုတ်ပစ် မယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော် သူ တို့ကို မကူညီနိုင်ဘူး။
ဒီလိုပဲ ရုရှားက ခင်ဗျားကို ဝင် ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ လူတွေ အများကြီးအတွက် ယုံရခက်နေ တုန်းပါပဲ။
ကျွန်တော်လက်တင်အမေရိ ကကို ဝင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေ မဲ့ အမေရိကန်အစိုးရက ကျွန် တော့်ရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ရုရှားလေဆိပ်မှာ ပိတ်မိသွားခဲ့ တယ်။ ကျွန်တော့်ကို လွှဲပြောင်း ပေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတက ရုရှားဆီကို နေ့တိုင်းတောင်းဆိုတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ တောင်းပန်မှုကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ ရုရှားက နောက်ဆုံးမှာ လက်သင့်ခံခဲ့တယ်။
တစ်ရက်ရက်မှာ ခင်ဗျား အမေရိ ကန်ကို ပြန်သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော် လင့်နေတုန်းပဲလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အသေအချာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် အနာဂတ်အ တွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတုန်းပဲ လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ခင်ဗျား ရုရှားမှာ ဥပဒေအရ ဘယ် လိုအခြေအနေနဲ့ နေနေတာလဲ။
ကျွန်တော်ဟာ ဥပဒေနဲ့ အညီအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် နေနေသူပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ခိုလှုံခွင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သုံးနှစ်ကြာတိုင် (ဒါ မှမဟုတ်) အဲဒီလောက်အချိန်မှာ သက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်မယ့်ဟာမျိုး ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ စင်စစ်အားဖြင့် အာမခံမထားဘူး။
ခင်ဗျားရဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လို ကုန်ဆုံးစေလဲ။
ကျွန်တော်ခရီးအများကြီး သွားတယ်။ ကျွန်တော်စိန့်ပီတာ စဘတ်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန် တော့်မိဘတွေ ကျွန်တော့်ဆီကို လာလည်ကြတယ်။
ဗီဒီယိုလိုင်းကတစ်ဆင့် ကျွန် တော်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေ ကို ပြောဆိုဆွေးနွေးပေးတယ်။ ပုံနှိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းလွတ်လပ်ခွင့် အဖွဲ့အတွက် ကျွန်တော်အလုပ် တွေ လုပ်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့မှာ ရွေး ကောက်ခံထားရတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါ တယ်။
ထောက်လှမ်းရေးဟာ ခင်ဗျားကို ထာဝရခြောက်လှန့်နေမယ့် ကိစ္စ တစ်ခုလို့ ထင်ရတယ်နော်။
ကျွန်တော့်ဘဝက နည်းပညာအလုပ်၊ ကျွန်တော်ဟာအင်ဂျင်နီ ယာတစ်ယောက်၊ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး။
မစ္စတာစနိုးဒန် ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။